Global Voices teny Malagasy » Global: Teny Grika mankany amin’ny teny Anglisy, teny Sinoa mankany amin’ny teny Rosiana, ary teny Espaniola mankany amin’ny teny Masedoniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2010 3:36 GMT 1	 · Mpanoratra Elena Ignatova Nandika miora
Sokajy: Eoropa Andrefana, Gresy, Fanabeazana, Fiteny, Haisoratra, Hevitra, Teknolojia
Samy efa nandre ireo zava-mahatsikaiky mitranga  isika rehefa lasa mampihomehy ny fandikana ireo fomba fitenin'ny teny iray avadika amin'ny teny hafa. Ny fandikana ireo teny sarotra ireo dia anisan'ireo fifaninanana lehibe indrindra ao anatin'ny fandikan-teny, na ho an'ny olombelona izany na ho an'ireo solosaina. Ny tena olana dia mitoetra eo amin'ny toetra/endrika ara-haintenin'izy ireny, ary tsy afaka avoaka avy amin'ny fitambaran'ireo teny mandrafitra azy ny dikany. Ohatra, ny ohatra tonta n'ny fiteny Anglisy ‘to kick the bucket ,’ ara-bakiteny midika hoe ‘maty’ , dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny daka na amin'ny tavin-drano.
WikIdioms  dia loharano ao amin'ny aterineto vaovao miezaka manampy ireo mpandika teny handresy izany olana izany. Niresaka tamin'ny mpamorona ity vohikala ity, Pavel Kats, sy tamin'ny iray amin'ireo mpanampy azy,Yasna Trandafilovska , izahay ka dia afaka izy ireo noho izany nanazava ny fiasan'izany tamin'ny fomba raitra .
A: Ny fitambaran'ny fandraisana anjara aloha amin'izao dia eo amin'ny mpandika teny 100 no mihoatra eo, ary mbola mitombo. Mbola vao tanora kely ity tetikasa ity, nefa amin'izao dia afaka mirehareha ho efa namoaka fomba fiteny mihoatra ny 30.000 avy amin'ireo teny mihoatra ny 30. Ary ny lanitra no fetra …
A: Ohatra iray tena mety tsara ity. Eritrereto hoe mandika lahatsoratry ny Global Voices amin'ny teny Anglisy mankany amina teny hafa ianao ary ahitana fomba fiteny iray ‘It’s Greek to me! ’ izay ny tena heviny ao anatiny dia tsy mazava amin'ilay mpiteny ny hevitra sasany ao amin'ny lahatsoratra. Ahoana no ahafahanao mahazo ny dika mitovy aminy amin'ireo teny hafa avy amin'ny hevitra sahala? Amin'izao, miaraka amin'ny fanampian'ny WikIdioms  dia fantatrao fa manana ny fombany ihany koa ireo teny hafa ireo hanehoana hevitra sahala: Ireo Rosiana mitaratra amin'ny Sinoa  ary ireo Masedoniana….amin'ny Espaniola !
A: Ny firotsahako tao amin'ny WikIdioms dia nilatsaka avy tany an-danitra  rehefa nandefa mailaka mikasika ny fitadiavan'i Pavel mpandika teny hanampy ny WikIdioms tamiko ny namako Grika iray. Efa nisinisy ihany izay no niasako ho mpandika teny, ary voamariko fa rehefa avy amin’ ny teny Masedoniana, dia tena sarotra ny mahita ireo loharano sy diksionary ao amin'ny aterineto afaka manampy ireo mpandika teny rehetra hamita ny asany haingana, madio ary tsara. Noho izany dia tonga saina aho fa tombontsoa lehibe entina hanovàna ny zava-misy izany. Nefa, satria tsy ho vitan'olon-tokana ny mahafantatra ny zava-drehetra ary satria miaina ny teny rehetra ary miovaova sy mivoatra hatrany, dia manasa ireo namako rehetra aho, ary indrindra indrindra fa ireo ekipan'ny Global Voices Lingua maneran-tany , mba hitsidika anay ary hanampy anay.
Q: Mpanampy ny Global Voices amin'ny teny Masedoniana  ihany koa ianao, afaka milaza aminay ve ianao hoe ahoana no nahitanao ity tetikasa ity ary inona no nanosika anao hirotsaka tamin'izany?
A: Nipetraka tany Grece aho efa 11 taona izao. Satria Grika ny vadiko, ao antrano izahay dia miteny Grika. Nandeha teny ny fotoana, tonga saina aho fa toa nanomboka adinoko ny tenin-drazako  ary tena nahasorena izany. Nanomboka nikaroka vahaolana aho ary nahita izany raha nandika lahatsoratra maromaro tao amin'ny Global Voices. Mihevitra aho fa mamporsika izany satria tsy misy fe-potoana amin'izany, tsy misy rarin-tsaina, tsy misy hazakazaka ary mihevitra aho fa rehefa manao zavatra ianao noho ny fitiavanao izany fotsiny ihany, ny vokany dia tena tsara, tena tsara lavitra mihitsy.
Yasna Trandafilovska  dia nanampy tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/28/7688/
 zava-mahatsikaiky mitranga: http://www.articlesbase.com/customer-service-articles/ten-global-translation-errors-made-by-big-companies-533055.html
 fomba raitra: http://www.wikidioms.com/find/en/idioms/i/in-the-best-manner
 ny lanitra no fetra: http://www.wikidioms.com/find/en/idioms/s/sky-is-the-limit
 avy tany an-danitra: http://www.wikidioms.com/find/en/idioms/O/out-of-the-blue
 rehefa avy amin’: http://www.wikidioms.com/find/en/idioms/W/when-it-comes-to
 Global Voices amin'ny teny Masedoniana: https://mk.globalvoicesonline.org/